Kanefron - kuhlanganiswe herbal izidakamizwa asetshenziswe izinso kanye wesinye. It kunomphumela isisu, kanye izakhiwo isinqandakuvunda futhi eqeda ukuvuvukala. Kanefron (ngesandla isho lesi) kuyinto antispasmodic futhi kunciphisa izimpawu buhlungu lokho avame ukuhamba sifo kohlelo urinary. Ekugcineni, ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa ngemithi elwa namagciwane ke uyakwazi agqamise ithonya lazo. Ngakho, ukusetshenziswa "Kanefron" izidakamizwa - lesi siyalelo ekucindezelekeni - kuboniswe hhayi kuphela njengenhlangano nomuthi ezimele, kodwa futhi ekwelapheni izifo we ngomgudu womchamo. Wenziwe ngendlela amaphilisi noma amaconsi.
Ekwakhiweni "Kanefron" imfundo uchaza kanje: sifaka izinto ezikhishwe herbal (izibhebhe - amakhambi, oluyimpuphu): centaury, lovage, rosemary - imali elinganayo. Kanefron amathonsi aqukethe ethanol.
Utshani centaury abavamile umuthi ezikhathini zasendulo. Umuthi olusemthethweni isetshenziswa ukwelapha izifo zesikhumba, kolwelwesi kanye cholecystitis, peptic isilonda isifo, dyskinesia biliary, isifo sokusha kwesibindi, pyelonephritis, urolithiasis. izinto zayo abamelwe babe choleretic, hepatoprotective, tonic, kuqinisela. Ukusetshenziswa amakhambi centaury belungiselela "Kanefron", eyakhiwa ezikhethwe ngokucophelela ngenxa umphumela wawo eqeda ukuvuvukala kanye isinqandakuvunda.
Izinto eziqukethwe lovage izidakamizwa, babe isisu (isisu) senzo. Ngaphezu kwalokho, luba buthaka zibe futhi, ngakho-ke, ingxenye analgesic ekwakhiweni "Kanefron". Ukufundiswa ubonisa ukuthi umphumela ukuthatha akhiphe lesi sitshalo sithuthukiswe excretion nosawoti ka uric acid, okwenza ukusetshenziswa kwalo kufaneleko at propensity kuya urolithiasis. Ngenxa okuqukethwe ukulungiswa imbiza Rosmarinus officinalis kuqinisekiswe ukusebenza yakhe eziphikelelayo eqeda ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, amafutha awo abalulekile kunomphumela oqinile imithi elwa nawo. Ngakho, Kanefron, ukusetshenziswa olubonakaliswa abadala nje kuphela kodwa futhi izingane, kuyaphumelela futhi akuyona neze ingozi ikhambi ngezindleko zemithi engamakhambi.
Umuthi isetshenziswa ekwelapheni cystitis oyingozi futhi ezingalapheki, pyelonephritis, glomerulonephritis. Ukusetshenziswa Its kuvezwa nephritis interstitial - isifo ukuvuvukala, ezilimaza ka tubules kwezinso futhi interstitium. Avamile engayitholi kanefron kusiza ukuvimbela ukwakheka amatshe e-izinso, futhi kuboniswe urolithiasis, kuhlanganise ngemva kokuhlinzwa.
Isikhathi kanefron kunqunywa isithombe mazombe seragelo lesi sifo, umthamo incike yobudala isiguli. Abadala kuvame iqondiswa amathonsi 50 noma amaphilisi amabili kathathu ngosuku. Umthamo izingane abaneminyaka engama emihlanu - isigamu ubukhulu: 25 amathonsi noma omunye amaphilisi camera kathathu ngosuku, kusukela ngonyaka owodwa kuya eminyakeni emihlanu - 15 amathonsi. Izingane enyakeni owodwa, uma kunesidingo, ukhethe eziyishumi sehla kathathu ngosuku. Kanefron kunengqondo ukuthatha nangemva nokuqedwa acute izimpawu ngomgudu womchamo: inkambo kahle kwelashwa okungenani amaviki amane kuya kwayisithupha.
Izidakamizwa "Kanefron" bathi akunangozi neze. contraindication kuphela ukuthola isici esiyingqayizivele bathole ezinye zezici zalo, kanye kuphela side effect - ukusabela nomzimba. Kanefron izimpawu of ukweqisa izidakamizwa Awaziwa, kusukela icala lakhe kwakungenziwanga kuchazwe.
Umuthi ivunyelwe ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa.
"Vagis": imibono mayelana nendlela ukunakekelwa obuseduze
Kungani ikhodi yokuphepha Instagram iza?